दूर्गम गाउँका सरसफाइ र सामाजिक रुपान्तरणको रत्न – WASHKhabar
१ माघ २०७७, बिहीबार ०८:४५ 1295 पटक हेरिएको
घरमा आएपछि उहाँको शिक्षण पेशा धरापमा पर्‍यो । शिक्षण पेशामात्र होइन, घरबाहिर जान पनि पितृसत्ताका खरो समर्थक ससुराले सहजै स्वीकृति दिनुहुँदैनथ्यो । आफ्नो जन्मघरमा फर्किएर जाने ढोका बन्द भएको उहाँलाई लाग्यो । “माइतीको स्वीकृतिविना अन्तरजातीय विवाह गरेर आएकी थिएँ, त्यसैले माइतीमा सहजै फर्किन सकिने अवस्था थिएन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसरी पनि संघर्ष गरेरै यही समुदायमा आफ्नो स्थान बनाउनुपर्ने थियो ।”
महिलाको इज्जत, आत्मसम्मान र सुरक्षाको सवाल उठाएकोले केही महिलाको साथ पाउनुभयो, तर केही उहाँलाई साथ दिन डराए । “पुरुषले बोलेको कुरा कसले काट्न सक्थ्यो र ?”, थालनीका दिनको संघर्षलाई रत्ना सम्झनुहुन्छ, “त्यसबेला सीमित छोरी बुहारीहरुले मलाई साथ दिए, तर उनीहरु बाहिर खुलेर बोल्न चाहँदैनथे ।” अझै धेरैले त यसले चर्पीका कुरा बाहेक अरु केही जान्दिनँ भनेर पनि गिज्याउँथे ।
त्यहाँ काम गर्न थालेको १० वर्षको अवधिमा उहाँले बेलबारीका सयौं घरधुरीको भ्रमण गर्नुभयो । कमजोर सरसफाइले स्वास्थ्यमा पार्ने असरको बारेमा बुझाउने मौका पाउनुभयो । परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य र बाल स्वास्थ्य त उहाँको जिम्मेवारीका क्षेत्र नै थिए । “त्यसबेलासम्म पनि मैले घरमा आफूले चाहेजस्तो सुरक्षित चर्पी बनाउन पाएकी थिइनँ”, उहाँ सम्झनुहुन्छ, “३१ वर्षअघि मूल घर छोडेर दुई बच्चा सहित हामी चार जनाको परिवार भिन्न भयौं, र चर्पी सहितको नयाँ घर बनायौं ।”
दशकौं लामो अथक संघर्षबाट अहिले बेलबारी नगरपालिका, वडा नं. ८ मा पर्ने डाँगिहाट बदलिएको छm। अहिले डाँगिहाटका सबै घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी छन् । खुलामा दिसा कही. कतै पनि भेटिदैन । सबै घरमा फोहर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । पानी शुद्धीकरण गरेर पिउँछन् । सुँगुर बंगुरलाई खोरमा पाल्छन् । गाईगोठहरु सफा छन् । घरमा करेसाबारी बनेका छन् । चर्पीसँगै साबुन पानीले हात धुने स्थान बनाइएको छ । सबै घरमा महिनावारीमैत्री व्यवहार हुन्छ । डाँगिहाटको आदर्श बस्ती राइझार अहिले सफा र स्वच्छ क्षेत्रका सबै सूचक पूरा गरी सरसफाइ नमूना गाउँ घोषणा हुने पहिलो बस्ती बनेको छ । विश्व चर्पी दिवसको अवसर पारेर गाउँलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गरियो ।
रत्नाको एकल प्रयासमा अघि बढिरहेको सामाजिक अभियानमा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग पुर्‍याए । “खुला दिसामुक्त अभियान थालनी हुनुअघि नै गाउँमा महिला सशक्तीकरण र सामाजिक जागरणका लागि नारी विकास संघले निकै सहयोग गर्‍यो”, उहाँ सम्झनुहुन्छ, “खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा सामुदायिक विकास समाज मार्फत ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍यायो । पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत नारी विकास संघले सहयोग गर्‍यो ।”